Izotope RX: နောက်ခံဆူညံသံကိုသင်၏အသံအသံဖမ်းများမှဖယ်ရှားနည်း | Martech Zone
Izotope RX: သင်၏အသံအသံဖမ်းခြင်းမှနောက်ခံဆူညံသံဖယ်ရှားနည်း
အင်္ဂါနေ့, စက်တင်ဘာလ 12, 2017 အင်္ဂါနေ့, စက်တင်ဘာလ 12, 2017 Douglas Karr
အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှအိမ်သို့ပြန်ခြင်း၊ စတူဒီယိုနားကြပ်ကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်သင်၏အသံသွင်းခြင်းတွင်နောက်ခံဆူညံသံများစွာရှိကြောင်းရှာဖွေခြင်းထက်ပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်အရာမရှိပါ။ ဒါကငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ငါအဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှာ Podcast တခုကိုအသံသွင်းပြီးစီးရီးလုပ်ပြီးပိုပြီးလေးနက်တဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့ Zoom H6 အသံဖမ်းစက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။
ငါတို့မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သီးသန့်စတူဒီယိုနေရာမရှိဘူး၊ လူစုလူဝေးနဲ့ဝေးတဲ့စားပွဲတစ်ခုမှာထိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကလုံးဝမကူညီဘူး။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တွင်ရောနှောစက်နှင့်စတူဒီယိုမိုက်ကရိုဖုန်းအချို့ရှိပါကကျွန်ုပ်သည်နောက်ခံများစွာကိုညှိနိုင်ခဲ့ပေမည်။ ငါစိတ်ပျက်သွားတယ်
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ခံအသံတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ Audacity ရဲ့ကိရိယာတွေနဲ့စမ်းသပ်မှုလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိချက်တွေကိုညှိလိုက်ရင်အသံကစတင်ပြီးအသံထွက်လာတယ်။ ငါဒီကိစ္စကိုကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံး podcast ဖိုရမ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသူငယ်ချင်းများတွင်တင်ခဲ့သည် Jen Edds ချက်ချင်းအကြံပြုခဲ့သည် Izotope RX6အသံဖိုင်များကိုပြုပြင်တဲ့သီးခြားကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
မည်သည့်လေ့ကျင့်မှုမျှမရဘဲ၊ Youtube ဗီဒီယိုကိုပင်ကြည့်ရှုခြင်းမရှိဘဲ၊ ကျွန်ုပ်၏ကြောက်စရာကောင်းသောအသံဖိုင်ကိုဒီကိရိယာထဲထည့်ပြီးနှိပ်လိုက်သည် အသံ - ဆူညံသံငါနောက်ခံဆူညံသံကိုနားထောင်အဖြစ်နှင့်ငါ့ဘောင်းဘီနီးပါးစိုစွတ်သောရိုးရှင်းစွာပျောက်ကွယ်သွား!
မင်းကဒီဟာကိုငါလုပ်နေတယ်လို့မင်းထင်ရင်ငါဆက်သွားပြီးရလဒ်တွေရဲ့အတိုကောက်ကိုမျှဝေလိုက်တယ်။ လုံးဝတုန်လှုပ်ချောက်ချား! ဘေးထွက်မှတ်စု - ကျွန်ုပ်စတူဒီယိုတွင်ဤအကြောင်းကိုမပြောခဲ့ပါ၊ Garageband ပေါ်တွင် desktop mic ကိုသာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုမစီရင်ပါနှင့်။
Izotope RX6 Voice De-noise သည်ဒေါ်လာ ၁၂၉ မှ ၉၉ ဒေါ်လာအထိရှိသည်။ ဤသည်သည်မိမိအသံဖမ်းရာတွင်နောက်ခံဆူညံသံနှင့်ရုန်းကန်နေရသောမည်သည့် podcaster အတွက်မဆိုလိုအပ်သည်။ ငါလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် mode ကိုနှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအသုံးပြုသွားမည်, ဒါပေမယ့်သင်ကတကယ်တော့သင့်ရဲ့အသံဖိုင်ပေါ်မှာ tools များ built-in နှင့်အတူ Photoshop ၌ရှိသကဲ့သို့သကဲ့သို့သင်တို့အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Izotope RX6 Voice De-noise ကိုဝယ်ပါ
Tags: နောက်ခံဆူညံသံဆူညံသံizotopeizotope rxrx6 izotopeနောက်ခံဆူညံသံဖယ်ရှားလိုက်ပါဆူညံသံကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ